Bluedio H-Turbine, ekweisi blu Bluetooth 4.1 na ọnụahịa dị oke ala | Akụkọ akụrụngwa
Kwa ụbọchị, ụwa ebe eriri ọ bụla na-akpasu anyị iwe gbara anyị gburugburu. Minituarization na nnwere onwe ibugharị Ngwa anyị ejirila oge "wireless" jikọta ya, ọ bụ ya mere ụzọ ndị ọzọ n'ime ụwa nke ụda agaghị ewe ogologo oge ịbata. Ọ bụ eziokwu na ekweisi Bluetooth anaghị enwe nnabata dị ukwuu n'ihi mbipụta ọchịchị obodo na ogo ya. Otú ọ dị, site na batrị ndị ọzọ na-esote ya na teknụzụ Bluetooth 4.1 nke a na-abịa na njedebe. Ọ bụ ya mere anyị ji ewetara gị otu ekweisi bluetooth nwere uru dị mma maka ego na ahịa, makana onye ọ bụla ga-enwerịrị ike ịnweta teknụzụ ikuku ikuku na-enweghị mkpa ịme na-enweghị ezigbo ọdịyo. Maka nke a anyị na-egosi gị omimi Bluedio H-Turbine, dị oke ọnụ, na-enweghị ihe ndị dị adị, mana nke ahụ na-enye nnwere onwe, njikọta Bluetooth 4.1 na ụda dị mma nke na-afọ obere anaghị enwe anyaụfụ ọtụtụ ekweisi dị elu.
1 Gịnị kpatara Bluedio? Ọnye na-bụ Bluedio?
2 Bluedio Turbine H, atụmatụ ndị bụ isi
3 Batrị na imewe
4 Nka na ụzụ nkọwa nke ụda na nyocha
5 Nkwubi okwu ikpeazụ
Gịnị kpatara Bluedio? Ọnye na-bụ Bluedio?
Bluedio bụ otu n'ime ụdị ndị China kpebiri na ha ga-ewepụ ihere nke ngwaahịa dị ala na ọnụ ala, ịbanye ngwaahịa dị n'etiti na nke dị elu na ọnụahịa dị oke ala. N'ihe banyere teknụzụ, ahịa ndị China maara otú ha ga-esi na-emegharị nke ọma na ngwa ngwa, Xiaomi, One Plus, Huawei ma ọ bụ Bluedio bụ ihe atụ doro anya banyere otu ha si kpebie ịbanye na teknụzụ teknụzụ iji chọpụta ụdị ndị ọkachamara na-emepụta ngwaahịa. ya na oke uru.
Bluedio Turbine H, atụmatụ ndị bụ isi
Anyị na-eche ihu ekweisi ekweisi Bluetooth, nwere atụmatụ nke ọhụụ na nke yiri ihe ọtụtụ ụdị ndị ọzọ na-enye. Na ihe kpamkpam polycarbonate ewu na-enye anyị a nso nke anọ na agba, acha anụnụ anụnụ, ọcha, nwa na-acha uhie uhie. Igweisi a na-enye atụmatụ ndị a:
Njikọ Bluetooth 4.1, ọgbọ kachasị ọhụrụ na obere oriri na ọsọ nke nnyefe.
Nkwado nhazi ụda
Enyemaka eriri njikọ site na nkedo 3,5mm
Igwe okwu na-arụ
Ike ịkekọrịta ọdịyo na ekweisi ndị ọzọ site na nkedo 3,5mm
Acoustic nkuzi mgbamejije (mkpọtụ) suppression
Ruo mita 10 nke nsoro Bluetooth
Batrị na imewe
Anyị na-achọta batrị lithium a na-ahụkarị nke na-enye anyị mkparịta ụka ruo awa 46, ebe ọ gụnyere igwe okwu, yabụ anyị nwere ike iji ya dịka aka. Ọ na-enyekwa ihe na-erughị oge 1625 iji kwụrụ ọtọ wee ruo elekere 40 nke mgbasa ozi egwu. Ichaji batrị zuru ezu ga-ewe ihe dị ka awa abụọ. Na vidiyo nke na-ebute ederede a, ị ga-ahụ nyocha na nbudata nke ekweisi na mbụ na ntanetị YouTube anyị.
Na ntị ntị aka nri, anyị na-ahụ LED nke ga-amata batrị anyị nwere yana njikọ Bluetooth dabere na agba ya. Banyere ọkà okwu, nha 57mm nke na-adịchaghị obere, opekata mpe ọ bụ otu anyị si ahụ ya. Banyere ihe a kapịrị ọnụ, anyị nọ n'ihu ekweisi na-aga n'ihu na usoro nke ihe anyị hụrụ n'ahịa, nke nwere ọdịdị gbara gburugburu na ngwakọta nke leatherette, na nchikota jikọtara ya na ụda na-enwu gbaa na nke ọ bụla na agba anọ anyị họọrọ.
Ndị a plastic ihe na-enweghị ụdị ọ bụla nke metal mkwado, ọ bụ ezie na o yiri ka ha na-plastic mejupụtara mejupụtara, Otú ọ dị, na plastic yiri ike na ike, ihe anyị na-ekwesịghị ịtụkwasị obi, ebe ọ bụ na imebi ya nwere ike ịdị mfe karịa ka anyị chere na mbụ anya. N'aka nke ọzọ, mkpuchi mkpuchi leatherette na-emezu ebumnobi ha nke ọma, isi dị n'elu dị mma, agbanyeghị, ekweisi nwere ike ghara iru ala na ebe mbụ n'akụkụ ntị mgbe ihe karịrị awa abụọ gafere, nke a ga-agbanwe na ojiji , mgbe ha malitere ịkpụzi ntakịrị ka anyị hara. N'ikpeazụ, enwere ike idozi ịdị ogologo nke isi ya na sistemụ ihe eji arụ ọrụ nke nwere ike ịdị njọ kwa ụbọchị.
Nka na ụzụ nkọwa nke ụda na nyocha
Ihe ịtụnanya dị na ụda ahụ, mụ onwe m jiri ohere ahụ hapụ ndị ahịa ndị ọzọ ka ha nwalee ekweisi ike, iji nweta echiche dịka ebumnuche dịka o kwere mee. Anyị niile bịara na nkwubi okwu na o siri ike ma ọ bụ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume inweta ụdị ahụ n’ọnụ ego yiri ya. Na mbu, basses juru gị anya, a mụbara ha n'ụzọ doro anya, ihe na-ekwesịghị iju gị anya n'ihi na ha na-akwalite ya nke ukwuu, ha bụ ekweisi na-elekwasị anya na egwu azụmahịa na nke elektrọnik, ọ bụrụ na ị bu n'obi ịnụ egwu egwu, ha bụ n'ezie ọ bụghị nke gị.
Ogologo oge: 2,4-2,45 GHz
Profaịlụ Bluetooth: A2DP AVRCP HFP HSP
Mgbu: 16 Ohms
Oge nzaghachi: 20Hz-20kHz
Mmetụta: 110 dB
Ogo ntụgharị okwu ụda: <0,1% THD
Ogo nke nnyefe ụda dịtụ elu karịa mgbe ị na-eme njikọ site na nkedo 3,5mm, anyị nwere ike ịbawanye ike nke ụda ntakịrị (ọbụlagodi na-ewe iwe) ma jiri obere nghọta ka anyị na-ege ya ntị, agbanyeghị, a naghị eche ha maka nke ahụ. Isi akụ ya bụ na jiri njikọta Bluetooth 4.1 nke obere oriri na ike dị elu, ya mere, ọdịyo Bluetooth dị ezigbo mma na-enweghị ụtọ. Ekwuru m, na nke mbụ ịlele ọdịyo ahụ site na Bluetooth ga-adị ka ihe a na-anabata, yana ọbụlagodi nke ọma, agbanyeghị ha na-enye ihe niile site na njikọ 3,5mm.
Ha bụ ekweisi "ọnụ ala", anyị ga-ebido na ndabere nke na anyị agaghị achọ ịchọta ekweisi site na ụdị ndị izugbe nke na-enye ogo a nke ọdịyo na imepụta aka na Bluetooth 4.1, ma ọ bụrụ na ọ bụghị. Site na ebe a anyị tụlere na ha abụghị ekweisi ziri ezi maka ndị na-ege ntị, mana maka ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ ezigbo ekweisi ikuku na ọnụahịa ka mma. Na ntanetị ị ga-ahụ nyocha ole na ole nke otu ekweisi ndị a, niile dị mma, n'eziokwu na Amazon ọnụọgụ ọnụọgụ ha bụ 4 n'ime 5.
Anyị ga-eburu n’uche na ogo nke ihe ndị ahụ nwere ike ọ gaghị aghọgbu anyị dịka na isi ekweisi Sony ma ọ bụ Philips ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta n’ụlọ ahịa eletrọnịkị ọ bụla, agbanyeghị na ha na-eguzogide ọgwụ ma sie ike maka ọgụ a na-alụ kwa ụbọchị, na mgbakwunye na ikuku.
Banyere ụda ahụ, ikekwe ọ nwere obere bass kwalitere, ihe na-edozi ngwa ngwa site na iji ụdị nhazi ọ bụla. Ihe ọdịyo nwere ike igosi igbu oge nke abụọ ma ọ bụ obere obere, nke Bluetooth na nke niile. Ha na-enye ike ụda dị oke elu, nke nwere ike bụrụ ihe mgbakasị mgbe ọ dị elu karịa 75%, yabụ ọ ga-amasị ndị hụrụ njikọ. Kedu ihe ọzọ kewapụta ụda niile dị n'èzí Mgbe anyị buliri ụda n'elu 50%, anyị agaghị anụ ihe ọ bụla ọzọ karịa egwu, yabụ kpachara anya, nke a nwere ike ịbụ pro ma ọ bụ con dabere na onye ọrụ. Ekwesịrị m ịkwado nzụta maka ndị na-anaghị eji ọrụ ha arụ ọrụ maka egwu ma chọọ igwe ekweisi ikuku na ọnụahịa dị oke ala. Ejikọtara ya na Bluetooth ha anaghị ahapụ ihe ọ bụla achọrọ ma e jiri ya tụnyere Sony Playstation Headset nke na-eweta 7.1 VSS ọdịyo na nke na-efu karịa okpukpu abụọ. Agbanyeghị, site na njikọ njikọ ihe gbanwere, Ezubere ekweisi ndị a iji mee ọdịiche site na Bluetooth, site na jack anyị na-ahụ ekweisi na-erute n'etiti etiti nke Sony na Philips dịka ọmụmaatụ, mana nke ahụ anaghị agafe ha. Agbanyeghị, ọbụlagodi na ha ga-abụ ezigbo azụmaahịa ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ọnụahịa nke ndị ahụ e kwuru n'elu.
Nyochaa: Miguel Hernandez Gutierrez
Nwere ike afanyekwa
Obere nkwakọ ngwaahịa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Bluedio H-tobaim, Bluetooth 4.1 ekweisi na a agafeghị oke price [Nyocha]